သက်ဝေ: ညနေ သုံးနာရီ
Yan November 8, 2012 at 3:13 PM
ဒီပို့စ်လေးကို တင်လိုက်တဲ့အချိန်က ညနေ သုံးနာရီ ဖြစ်နေခဲ့ပေမယ့် ဖတ်မိတဲ့ မြောက်အမေရိကတိုက်က လူတစ်ယောက်အတွက်တော့ နံနက် ၂ နာရီ ဖြစ်နေခဲ့တယ်. အမှန်ဆို Daylight Saving မပြောင်းခင် တင်ခဲ့သင့်တာ. ဒါမှ မနက် ၃ နာရီ ဖတ်ခွင့်ရနေမှာလေ.း)
အစွဲတွေလျှော့ ငါ့အစ်မ. အိုခေ :P
စိုင်းအောင်မျိုးလွင် November 8, 2012 at 3:22 PM
မောင်မျိုး November 8, 2012 at 3:48 PM
ဟုတ်သား ညနေ ၃ နာရီထိုးတိုင်း ရုံးဆင်းချိန်က ဘာလို့များ ၂ နာရီကြီးများတောင် လိုနေတာလဲ ဖြစ်မိတယ်း)
ပိတ်ရက်ဆို ဆက်အိပ်ဖို့လည်းမဖြစ် ထမင်းတည်ဖို့ကျတော့လည်း စောသေးတယ် ကိုးယိုးကားယား နိုင်တဲ့ ၃ နာရီပဲ။
ကောင်မလေး အဖြေပေးတာကတော့ ညနေမဟုတ်ဘူးဗျ မနက် ၃ နာရီကြီး ခြင်ကိုက်လို့အိပ်မတာနဲ့ အပျင်းပြေအေ့ဖြပေးလိုက်တာများလားမသိ :P
မိုးငွေ့........ November 8, 2012 at 4:20 PM
ညနေသုံးနာရီဆိုတဲ့ ပို့်စ်အသစ်တက်လာတာ တခါတုန်းက ဖတ်ပြီးသားပို့စ်တခုလို့ထင်လိုက်တယ် မသေချာဘူး...အဲဒီထဲက နိဒါန်းစာသားလေးတချို့ကိုပဲ အမတစ်နေရာရာမှာတင်ထားလို့ ဖတ်ဖူးတာဖြစ်လိမ့်မယ်ထင်တယ်...။
မြန်မာ စံတော်ချိန် ညနေသုံးနာရီ တိတိတွင်လာရောက်ဖတ်ရှုသွားပါကြောင်း................
ညီလင်းသစ် November 8, 2012 at 5:27 PM
ဒီကော်မန့် ရေးချိန်ကတော့ ဒီကစံတော်ချိန် သုံးနာရီ မရောက်သေးသလို အဲဒီက စံတော်ချိန်က သုံးနာရီ ကျော်သွားပြီးလောက်တဲ့ အချိန်ပါပဲ...၊း)
မရှိမဖြစ်မိုးထဲက (နာမည်အမှတ်မမှားရင်) မင်းထင်ကျော်နဲ့ မိုးနဲ့ တွေ့ဆုံချိန်လေးကို ဖြတ်ကနဲ အမှတ်ရလိုက်မိတယ်၊ ဒါပေမယ့် သွေးစစ်ချက် အဖြေတစ်ခုရဖို့ သုံးနာရီနဲ့ စာအုပ်မှာဖို့ သုံးနာရီ ကတော့ ဝန်လေးပင်ပန်းမှုချင်း ယှဉ်မရအောင် ကွာမယ်ဆိုတာ ကျနော် နည်းနည်းလေးမှ သံသယ မဖြစ်မိပါဘူး၊ ဖတ်နေရင်းနဲ့ သုံးဂဏန်းဆီကို အလုအယက် သွားနေကြတဲ့ စက္ကန့်၊ မိနစ်၊ နာရီတံတွေကို မောမောနဲ့ မြင်နေခဲ့တယ်...။
“ညနေ ၃နာရီ” ဆိုတာနဲ.ပတ်သက်လို. စာရေးဆရာမ“ဂျုး” ရေးဖူးတယ်။ ညနေ၃နာရီဆိုတဲ.အချိန်ဟာ တခုခုလုပ်ဖို. စောသေးတယ်လို.ပြောလို.ရသလို၊ တခုခုလုပ်ဖို. နောက်ကျတယ်လို.လဲပြောလို.ရတဲ.အချိန်မျိုးတဲ.။
စာလုံးတွေအတိအကျမဟုတ်ပေမယ်. အဓိပါယ်က အဲ.လိုမျိုးဘဲဆိုတာတော. မှတ်မိနေတယ်။
မမိုး November 8, 2012 at 10:00 PM
တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် ဒီပိုစ့်ဖတ်ပြီးချိန်က ညနေ ၃နာရီတိတိ
Thandar Lwin November 9, 2012 at 9:33 AM
ပုံမှန် ရုံးမှာ နာရီ ကြည့်လို့ ၃နာရီ ထိုးပြီဆို ကိုယ့်ဘက်ရောက်လာပြီ လို့ တွေးမိတယ် အမ...:D
မီးချစ် November 9, 2012 at 5:39 PM
ခုမှ ညနေသုံးနာရီကို သေသေချာချာ သတိထားမိပြီ.. ရင်သပ်ရှုမော ညနေသုံးနာရီ
မြတ်ပန်းနွယ် (Myat Pan Nwe) November 10, 2012 at 6:27 PM
ဒီပို့စ်ကို ဖတ်ရင်း ညနေသုံးနာရီနဲ့ စထားတဲ့ ဆရာမဂျူးရဲ့ မရှိမဖြစ်မိုး ဝတ္တုရှည်ကလေးကို ဖျတ်ခနဲ သတိရလိုက်မိသေးတယ်။
Hmoo November 11, 2012 at 4:53 AM